Estudar Inglês na América (Informações sobre WESLI em birmanês) | WESLI Estudar Inglês na América (Informações sobre WESLI em birmanês) – WESLI
Estudar Inglês na América (Informações sobre WESLI em birmanês)
PERFIL SCHOOL ကျောင်း သ မိုင်း အကျ ဉ်း
WESLI (Wisconsin Inglês Second Language Institute) ကို Wisconsin ပြည်နယ်၏ မြို့တော် Madison တွင် ၁၉၈၁ခုနှစ်က တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်တွင် တက္ကသိုလ်တက်လိုသော ကျောင်းသားများ၊ မိမိ၏ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်လိုသူများ နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အကိုင်များရရှိရန်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာလိုသူများအတွက် WESLI တွင် Level ၈ခုခွဲကာ သင်ကြားပေးနေပါသည်။
WESLI တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ခန့်မှ ကျောင်းသား ၁၈၀ခန့်တက်ရောက်လျှက်ရှိကြသည်။ WESLI တွင် တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသားတိုင်းအတွက် လေဆိပ်တွင် လာရောက်ကြိုပေးခြင်း၊ နေထိုင်ရန် ကူညီပေးခြင်း နှင့် တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ရန် ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။ WESLI ကို State of Wisconsin Educational Approval Board မှ တရားဝင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီး American Association of Intensive English Programs (AAIEP) ၏ အ သင်း0င်ြ ဖစ် သ ည့်O မှ တရား0င်အသိအ မှတ်ြ ပု ထား သော ကျောင်း တစ် ကျောင်းြ ဖစ် ကာြ ပည် နယ် ဥပေ ဒနှင့်အ ညီ အေ မ ရိ ကန် တွင် ကျောင်း တက် လိုေ သာ ကျောင်း သား များကို သာ0င်ခွ င့်ြ ပုေ သာ ကျောင်းြ ဖစ် သည်. အေ သး စိတ် သိ ရှိ လိုပါက WESLI ၏0က်ဘ်ဆိုက် လိပ် စာ www.wesli.com0pode ser acessado.
Ter um seguro, desejável Bonitoedivertido
CLASSES & CRONOGRAMA: E as listas de classe
Admissão condicional OVERSEAS (PAI): ပြည်ပကျောင်းသား ခြွင်းချက်ဝင်ခွင့် (အိုစီအေ)
HOMESTAY com uma família americana: အမေရိကန်မိသားစုဝင်များနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်း
ALUNA (F-1) VISA: ကျောင်းသားဗီဇာ (F-1):